कम्युनिस्टप्रति भारत कठोर बन्न लागेको हो ? | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
कम्युनिस्टप्रति भारत कठोर बन्न लागेको हो ?
समाचार विश्लेषण । नेपालमा झण्डै दुई तिहाईको कम्युनिस्ट सरकार भएकै बेलामा नयाँ नक्शा जारी भएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समावेश गरी नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेपछि नयाँ दिल्लीमा तरंग आएको छ ।
भारतले लिपुलेक हुँदै चीनको सीमासम्म जोडिने लिंकरोड खोलेपछि नेपालले आपत्ती जनाउँदै कडा कदम चाल्यो । योसँगै भारतमा कम्युनिस्टहरुको विगत र वर्तमानबारे विश्लेषण हुन थालेको छ ।
भारतका पूर्व सैनिक जनरल गगन दीप बक्सीले भारतले विगतमा नेपालमा हिन्दु राष्ट्र ध्वस्त पारेर माओवादीलाई स्थापित गर्नु ठुलो गल्ती भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले एबीपी न्युजसँग यसै हप्ता अन्तवार्तामा भने, ‘हिन्दु राज्य ध्वस्त पारेर माओवादीलाई स्थापित गर्नु हाम्रो ठुलो गल्ती थियो ।’ माओवादीलाई समर्थन गर्दा सेल्फ गोल गरेको उल्लेख गर्दै कम्युनिस्टहरुले नै नेपालमा चीनलाई ल्याएर भारतलाई चुनौती दिएको आरोप लगाए ।
भारतको सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रवक्ता प्रेम शुक्लाले माओवादीलाई विगतमा पालेर राजनीतिक प्रबलता दिइएको बताए । उनले साम्यवादी शक्तिलाई पालेर राजनीतिक प्रबलता दिनुलाई गम्भीर गल्ती समेत भनेका छन् । भारतको टेलिभिजन च्यानल एबीपी न्युजसँगको अन्तवार्तामा भाजपा प्रवक्ता शुक्लाले भने, ‘प्रचण्ड जस्ता साम्यवादी शक्तिलाई जेएनयुमा पालेर राजनीतिक प्रबलता दिइयो ।’ कँग्रेस आईको पालामा राजीब गान्धीलाई पशुपतिनाथको दर्शन गर्न नदिइएको विषय उल्लेख गर्दै त्यसपछि हिन्दु शासकहरुप्रति फरक धारणा पैदा गरिएको समेत आरोप लगाए ।
कम्युनिस्ट सरकारले सिमा विवादमा तेस्रो पक्षका रुपमा चीनलाई ल्याएको भन्दै यो स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘चीनलाई ल्याउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उनले अहिले नेपालमा साम्राज्यवादी शक्तिको नांगो नाँच चलिरहेको समेत बताए ।
नेपाल मामलाका जानकार जनरल अशोक मेहताले तत्काल वार्ता हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले एक हप्ताभित्र अनलाइनमै भएपनि वार्ता हुनुपर्ने बताए । अर्का भारतीय विद्धान प्राध्यापक महेन्द्र पी लामाले पनि वार्ताको विकल्प नभएको बताए । नेपाल मामलाका जानकार प्राध्यापक एस डी मुनीले भारत नेपाल मामलामा असफल हुँदै गएको आरोप लगाएका छन् ।
भारतमा एकपक्ष वार्तामा जोड दिइरहेको छ । एउटा तप्का चीनलाई नेपालको कम्युनिस्ट सरकारले ठाउँ दिएको भन्न थालेका छन् । उनीहरु विगतमा हिन्दु राष्ट्रको अन्तमा भारतको भुमिकाप्रति प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसलाई जनरल बक्सीले सेल्फ गोल भनेका छन् । यो सेल्फ गोलले चीनलाई निकै ठाउँ दिएको उनको तर्क छ । जनरल अशोक मेहताले चीनको नेपाल मामलामा निकै बदलाव आइसकेको बताए । चीनले सत्तारुढ नेकपाको आन्तरिक विवादमा सम्झौता गराइदिएको उनको भनाई छ । नेपालमा भारतको प्रभाव रहेकोमा अहिले चीनले जितिसकेको बताए । उनले भने, ‘चीनले वामपन्थी एलाइन्स बनायो ।’ नेकपा एकीकरण चीनले गराएको बताए ।
चीनको बढ्दो प्रभाव बढिरहँदा भारतमा कम्युनिस्ट शक्तिलाई सघाएकोमा गम्भीर विश्लेषणहरु हुन थालेको छ । जनरल बक्सीको भनाईलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने भारतभित्र कम्युनिस्ट शक्तिलाई विगतमा साथ दिनुलाई गम्भीर गल्ती भनिएको छ । यदि भारत यस्तो निष्कर्षमा पुगेमा नेपालको राजनीतिमा कस्तो असर पर्छ ? यो प्रश्न चासोको विषय बन्नसक्छ ।
भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीमाथि धर्मको राजनीति गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । उसले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुर्नस्थापनाको चाहना राखेको विषय चर्चामा आउनेगर्छ । भाजपाका केही नेताहरुको भनाई र दबाब त्यसैतर्फ छ । घटनाक्रम यसरी विकास हुँदैछ कि यसले राजनीतिमा नयाँ दुर्घटनाको सम्भावना बढेको छ । भारतमा नेपाल मामलामा पुर्नविचारको विषय उठ्न थालेको छ । जसलाई भाजपा नेता प्रमोद शुक्लाले पनि संकेत गरेका छन् । घटनाक्रमले भारतले विगतमा परिवर्तनका लागि दिदै आएको साथलाई फर्केर हेर्न थालेको छ । यसले राजनीतिमा नयाँ सम्भावनाको मार्ग कोर्दै लानसक्ने देखिएको छ ।-File Photo
कोरोना भाइरसबाट थप एकजनाको मृत्यु, कुल मृतक संख्या १० पुग्यो
काठमाडौं, २२ जेठ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप एकजनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य
थप ३३४ जनामा कोरोनाको संक्रमण, कुल संक्रमितको संख्या २६३४ पुग्यो
काठमाडौं, २२ जेठ । थप ३३४ जनामा कोरोनाको संक्रमण भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या